Mar Kasta Waan Difaacaa Ciyaartoyga, Laakiin Maanta Ma Difaacayo – Zidane Oo Cadho Kula Dul-dhacay Ciyaartoygiisa Iyo Xiddig Uu Si Gaar Ah U Abbaaray – Latest Sports News
Mar Kasta Waan Difaacaa Ciyaartoyga, Laakiin Maanta Ma Difaacayo – Zidane Oo Cadho Kula Dul-dhacay Ciyaartoygiisa Iyo Xiddig Uu Si Gaar Ah U Abbaaray
Guul-darradii ugu dambaysay ee Real Madrid ay xalay kala kulantay Rayo Vallecano, waxay sababtay in Zinedine Zidane uu markii ugu horreysay si toos ah ciyaaryahannadiisa uga canaanto warbaahinta, waxaana uu dhamaadkii ciyaarta tibaaxay in aanay haba yaraatee laacibiintiisu waxba la imanin garoonka.
Karim Benzema oo siddeed gool u dhaliyey shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey, ayaa xalay dhaawac kaga maqnaa kulanka, laakiin booskiisa waxa loosoo xulay Gareth Bale oo hoggaaminayey afka hore, hase yeeshee waxa uu ahaa maqane jooga oo ugu dambayn ku qasbay Zidane inuu su’aal geliyo sida uu diyaarka ugu yahay inuu usii ciyaaro kooxda.
“Waxba maanaan samaynin. Heer kasta waxba kamaanu samaynin. Mararka qaarkood waad ku fashilmaysaa inaad gool dhaliso, laakiin anagu waxba maanaan qabanin si aanu gool u dhalino.” Sidaas waxa yidhi Zidane kaddib ciyaartii xalay.
Tababaruhu waxa uu sheegay inuu ka cadhaysan yahay bandhig ciyaareedkii kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waan cadhaysanahay, sababtoo ah (guul-darradani) may ahayn nasiib-darro, aniga ayaana masuuliyaddeeda leh.”
Zidane waxa kale oo uu xusay in mar kasta uu difaaco ciyaaryahannadiisa, laakiin aanu markan difaacaynin, sidoo kalena waxa uu su’aal geliyey diyaarsanaanta Gareth Bale, waxaanu yidhi: “Mar kasta waan difaacaa ciyaartoygayga, laakiin maanta maya. Uma ciyaari karno sidaas, laakiin aniga ayaa sidoo kale masuuliyadda leh. Ma garanayo in Bale uu diiradda saarayey kulanka, isaga ayaad weydiin kartaa.”